वर्षाले गरिन हनिमुन सम्बन्धि यस्तो खुलासा, भन्छिन पहिलो सन्तान छोरी नै हो ! ( भिडियो अन्तर्वार्ता ) – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsवर्षाले गरिन हनिमुन सम्बन्धि यस्तो खुलासा, भन्छिन पहिलो सन्तान छोरी नै हो ! ( भिडियो अन्तर्वार्ता )
वर्षाले गरिन हनिमुन सम्बन्धि यस्तो खुलासा, भन्छिन पहिलो सन्तान छोरी नै हो ! ( भिडियो अन्तर्वार्ता )
May 16, 2019 Tulasa Karki News, Video, Video Interview 0
चर्चित अभिनेत्री वर्षा राउत अहिले फिल्म ‘जात्रै जात्रा’को प्रचारप्रसारमा व्यस्त छिन । भखरैमात्र बैवाहिक बन्धनमा बाधिएकी उनि घर-गृहस्तीसँगै फिल्ममा पनि निकै सक्रिय बनिरहेकी छिन । उनको आगामी फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ जेठ ३ यानिकी भोलिबाट देशव्यापी प्रर्दशनमा आउदै छ । फिल्मको प्रर्दशन मिती नजिकिएसँगै निर्माण टिमकासाथमा उनले फिल्मको प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएकी छिन ।
यसैक्रममा अहिले उनले सुत्र इन्टरटेन्मेन्टसँग अन्तर्वार्ता दिइएकी छिन । अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा उनले फिल्मसँगै आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा पनि बताएकी छिन । उनि विवाहपछि र अघिको जीवनमा खासै फरक नभएको बताउछिन । साथै उनले आफ्नो हनिमुन पनि खासै फरक नभएको बताइन । उनका अनुसार, विवाह अगाडी एकअर्कालाई गरेको डेटलाईनै विवाहपछि हनिमुनको नाममा दिने बताइन ।
साथै उनले आफ्नो पहिलो सन्तानको बारेमा पनि मुख खोलिन । उनि भन्छिन ‘मलाई लक्ष्मी यानिकी छोरी एकदम मन पर्छ र मेरो पहिलो सन्तान छोरी नै हो । तर अहिले छोरीको नाम भने सोचेको छैन’ ।
फिल्म नपाएपछि खोलाको छेउमा माछा बेच्दै चर्चित कलाकार Kameshwor Chaurasiya
अन्जु पन्त र रोशन अधिकारीको ‘झ्यालको पर्दा’